N'ihu na-eme a nkwụnye ego n'ihi na egwu na-akpọ ezigbo ego, mkpa ka ị denyere aha na nbanye. N'ihi na onye ọ bụla usoro nke ịkwụ ụgwọ, e nyere gị ihe ndị doro. I nwekwara ike ike iche iche ihe ndekọ ọ bụla nke họọrọ mode nke ịkwụ ụgwọ. Soro n'okpuru iji mee ka a nkwụnye ego na akaụntụ gị:
.Pịa na "okwu ugwo" akara ma họrọ ego nhọrọ.
.Họrọ nkwụnye ego mode.
.Mezue ụdị metụtara họrọ nkwụnye ego ụzọ, na pịa Deposit.
.-Họọrọ mode nke ịkwụ ụgwọ ga-ebubo na akaụntụ gị na-otoro.
.A mail nkwenye banyere aka na azụmahịa nkọwa e zigara.
All gị ichekwa ego na bank nkọwa nwere kpamkpam nchebe dị ka TopSlotSite-eji ndị ọhụrụ izo ya ezo ma na-echebe software.
Niile online ọrụ njikwa ego ekenịmde TopSlotSite na-nye site na olor Management Limited. pịa ebe a ịmatakwu.
Player na-agaghị emeli na exclusions pịa ebe a.
.Fast multi-ego azụmahịa na-eji gị Debit / Ebe E Si Nweta kaadị.
.Ego n'otu ntabi dị na gị TopSlotSite akaụntụ ozugbo bufee
.How to fund: Ị nwere ike enweta ego gị NETeller akaụntụ n'iji usoro: Kaadị akwụmụgwọ (cary ịkwụ ụgwọ na-esichara na ozugbo, -enye gị ntabi ohere gị ego!), online Check (EFT), InstaCASH, na Bank Waya.
.internet Banking: ụfọdụ mmiri-ekwe ka ndị ahịa ha nyefee ego kpọmkwem site ha online akụ n'ime ha NETeller akaụntụ. Check with your bank for more details.
.How to fund: Aha nile akwụmụgwọ gị / debit kaadị na akụ nkọwa na Moneybookers na-eji ha akwụ na n'elu 20,000 online ụlọ ahịa. Nke a pụtara na ị dịghị mkpa ka ha nye ha oge ọ bụla ị chọrọ ịzụta ngwaahịa na ọrụ online.
UKash bụ a ugwo ọrụ na-eji njikere na-emefu vouchers nwere a 19-ọbula code. Ị nwere ike ịzụta UKash vouchers online ma ọ bụ na ego ma ọ bụ kaadị na puku ebe dị otú ahụ dị ka obodo ụlọ ahịa na ozi ọma elekọta mmadụ, wee jiri ndepụta ego iji kwụọ ụgwọ maka ngwaahịa na ọrụ (ebe nabatara). Ị adịghị mkpa aha ma ọ bụ na-enye ihe ọ bụla na nkọwa. Ị na-adịghị ọbụna mkpa a akụ.
.Chọpụta ihe na www.ukash.com
.-Akwụ via UKash, nanị ahọrọ Ukash nhọrọ si onye okwu ugwo na TopSlotSite . Wee tinye 19-ọbula koodu na uru nke ndepụta ego. Your payment is accepted immediately.
.Ị nwere ike iji UKash-eme ka otu ugwo site na £ 5 ka £ 200 (ma ọ bụ Ẹkot). Dị ka u nweghị "akaụntụ", no further payments can be taken from you. When you want to pay again, just get more Ukash.
If you have any problems with depositing funds, don’t worry, ị nwere ike ịkpọtụrụ otu n'ime anyị ukwuu zụọ ahịa ọrụ ndị 24 awa nke ụbọchị site email, phone or online chat – Contact Us .